ဗာရုတ်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဗာရုတ်သည်
1:1 And these are the words of the book, which Baruch the son of Neraiah, Mahseiah ၏သား, the son of Zedekiah, the son of Hasadiah, the son Hilkiah, wrote in Babylon,
1:7 And they sent it to Jerusalem to Jehoiakim, ဟိလခိ၏သား, the son of Shalum the priest, ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့, နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်မှ, who were found with him in Jerusalem.
1:8 ထိုအချိန်မှာ, he received the vessels of the temple of the Lord (which had been carried away from the temple) so as to return them to the land of Judah, on the tenth day of the month Sivan. These were the silver vessels, which Zedekiah, the son of Josiah king of Judah, had made.
1:9 ထိုနောက်မှ, ဗုခဒ်နေဇာ, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, captured Jeconiah, and the leaders, and all the powerful, ပွညျသူပွညျသားမြားနှငျ့လူအ, and led them captive from Jerusalem to Babylon.
1:10 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, “Behold we have sent you money with which to buy holocausts and frankincense. ထို့ကြောင့်, make manna and offer it for sin at the altar of the Lord our God.
1:11 And pray for the life of Nebuchadnezzar, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, and for the life of Belshazzar his son, so that their days may be just like the days of the heaven above the earth,
1:15 တဖန်သင်တို့ဆိုလိမ့်မည်, '' သခင်ဘုရားကိုရန်ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျတရားမျှတမှုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့မကျြနှာရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ယုဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားအဘို့ဤနေ့သည်နည်းတူ,
1:16 ငါတို့အဘို့ရှငျဘုရငျတို့, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များက, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်, ပရောဖကျတို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏, ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်.
1:17 ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြစ်မှားပြီနဲ့ငါတို့ယုံကြည်သောကြပြီမဟုတ်, သူ့ကိုမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု.
1:18 ငါတို့သည်သူ့ကိုလကျအောကျခံဖြစ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရား၏စကားသံကိုကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျမှနားမထောင်ခဲ့ကြ, ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်၌ကျင်လည်သကဲ့သို့, တော်မူသောသူသည်ငါတို့အားပေးတော်မူပြီ.
1:19 သူသည်အဲဂုတ္တုပြည်ထဲကငါတို့ဘိုးဘေးဦးဆောင်သောသော နေ့မှစ., ပင်ယနေ့တိုင်အောင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားပြစ်မှားကြ၏, နှင့်, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခဲ့ကြပြီးမှ, ကျနော်တို့ကိုပယ်ကျဆင်း. ကျနော်တို့ကသူ့စကားသံကိုနားမထောင်ဘဲ.
1:20 ငါတို့သည်အများအပြားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရန်နှင့်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားဖြင့်သာတည်ရသောအမင်္ဂလာမှကိုယျ့ကိုယျကိုလာရောက်ပူးပေါင်း, မိမိကျွန်, အဘယ်သူသည်အဲဂုတ္တုပြည်ထဲကငါတို့ဘိုးဘေးဦးဆောင်သော, ကျွန်တော်တို့ကိုနို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်ကိုပေးတော်မူရန်, ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်နေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်သကဲ့သို့.
1:21 ငါတို့သည်သခင်ဘုရား၏စကားသံကိုကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျမှနားမထောင်ခဲ့ကြ, သူကျွန်တော်တို့ကိုစလှေတျတျောမူသောပရောဖကျအပေါငျးတို့သစကားအတိုငျး.
1:22 ငါတို့သည်လှည့်ဖြားပြီ, သူ့ကိုယ်ပိုင်ကင်ဆာနှလုံးရဲ့အစိတျအပြီးအသီးအသီး, အခြားတပါးသောဘုရားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နှင့်သခင်၏မျက်စိကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျရှေ့တျော၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်.
2:11 နှင့်ယခု, အိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခငျထာဝရဘုရား, who has led your people out of the land of Egypt withastrong hand, and with signs, and with wonders, and with your great power, and with an exalted arm, and has madeaname for yourself, just as on this day,
2:12 we have sinned, we become impious, ကျနော်တို့မတရားပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်, အိုထာဝရဘုရားကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, against all your principles.
2:14 Heed, အိုထာဝရဘုရား, our petitions and our prayers, and deliver us for your own sake, and grant that we may find favor before the face of those who have led us away,
2:16 Gaze upon us, အိုထာဝရဘုရား, from your holy home, နှင့်သင့်နား, and heed us.
2:18 But the soul that is sorrowful for the greatness of evil, approaches bowed down and weak, and the failing eyes and the hungering soul give glory and justice to you, ဘုရားသခင်.
2:19 For it is not according to the righteousness of our fathers that we pour out our petitions and beg mercy in your sight, အိုထာဝရဘုရားကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ,
2:20 but because you have sent your wrath and your fury upon us, just as you have spoken by the hand of your children the prophets, ဟုဆို:
2:21 "အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ‘Bow down your shoulder and your neck, and do work for the king of Babylon, and settle in the land which I gave to your fathers,
2:25 နှင့်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, they have been cast out into the heat of the sun and the frost of the night, and they have died by means of grievous evils, by famine, and by the sword, and by banishment.
2:27 And you have accomplished in us, အိုထာဝရဘုရားကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, according to all your goodness and according to all your great mercy,
2:29 ဟုဆို: “If you will not listen to my voice, this great multitude will be changed into the least among the peoples, where I will scatter them.
2:31 and they will know that I am the Lord their God. ထိုအခါငါကသူတို့ကိုနှလုံးကိုပေးမည်, and they will understand, ears, and they will hear.
2:34 And I will restore them to the land which I pledged to their fathers, အာဗြဟံသည်, ဣဇာက်သည်, နှင့်ယာကုပ်, and they will rule over it, and I will multiply them, and they will not be diminished.
2:35 And I will establish for themanew and everlasting covenant, so that I will be their God and they will be my people. And I will no longer move my people, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်, out of the land which I have given them.”
3:1 “ ‘And now, O Lord Almighty, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, the soul in anguish and the troubled spirit cry out to you.
3:2 နားထောင်, အိုထာဝရဘုရား, and be merciful, for you areamerciful God, and so be merciful to us, for we have sinned before you.
3:4 O Lord Almighty, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, listen now to the prayer of the dead of Israel and of their sons, who have sinned before you and have not listened to the voice of the Lord their God, and have joined themselves to evil.
3:6 သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျထာဝရဘုရား၏အဖြစ်ကြ၏, and we will praise you, အိုထာဝရဘုရား.
3:7 နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, you have imparted your fear into our hearts, လည်း, so that we may call upon your name and may praise you in our captivity, for we are converted from the iniquity of our fathers, who sinned before you.
3:8 နှင့်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, we are still in our captivity on this day, where you have scattered us into disgrace, and into slander, and into sin, according to all the iniquities of our fathers, who withdrew from you, အိုထာဝရဘုရားကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ.
3:9 နားထောင်, အိုဣသရေလအမျိုး, to the commandments of life! အာရုံစိုက်, so that you may learn prudence!
3:10 How is it, အိုဣသရေလအမျိုး, that you are in the land of your enemies,
3:24 အိုဣသရေလအမျိုး, how great is the house of God, and how vast is the place of his possession!
3:28 နှင့်, because they did not have wisdom, they passed away asaresult of their foolishness.
3:34 Yet the stars have given light from their posts, သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏.
3:38 ထိုနောက်မှ, he was seen on earth, and he conversed with men.
4:2 ပွောငျး, အိုယာကုပ်, and embrace it, walk in the way of its splendor, facing its light.
4:4 We have been happy, အိုဣသရေလအမျိုး, because the things that are pleasing to God have been made clear to us.
4:5 စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစဉ်အမြဲပိုပြီးငြိမ်းချမ်းသောဖြစ်, အိုဘုရားသခင်၏လူဦး, ဣသရေလအမျိုး၏အောက်မေ့ဖွယ်.
4:6 သငျသညျတပါးအမြိုးသားထံရောင်းချခဲ့ကြ, မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့, ဒါပေမယ့်ဤအကြောင်းကြောင့်၏, မကျေနပ်မှုအတွက်, သငျသညျအမျက်တော်သည်ဘုရားသခင့သူတို့ကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်း, ဒါသင့်အားဒုက္ခမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပြီ.
4:7 သင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ့ကို exasperated ကြပြီ, ထာဝရဘုရားသခင့, နတ်ဆိုးတို့အားယဇ်ပူဇော်သဖြင့်, ဘုရားမမှ.
4:8 သင်သည်ဘုရားသခင်မေ့လျော့ကြပြီများအတွက်, အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုပျိုးထောင်, သငျတို့သည်ယေရုရှလင်ဝမ်းနည်းခဲ့ကြ, သင့်ရဲ့သူနာပြု.
4:9 သူမသငျသညျခဉျြးကပျသညျဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်ကိုမြင်လျှင်များအတွက်, နှင့်သူမကပြောသည်, "Listen, ဇိအုန်မြို့၏ဒေသတွင်းမှာ, ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုအပေါ်သို့အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့ဆောငျတျောမူပွီ.
4:10 ငါသည်ငါ၏လူတို့အသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဘို့မြင်ကြပြီ, ငါ၏သားသမီး, အရာထာဝရသူတို့အပေါ်မှာကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်.
4:11 ငါဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူတို့ကိုပျိုးထောင်ဘို့, ဒါပေမယ့်ငါငိုကြွေးဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တကွသူတို့ကိုလွှတ်.
4:12 အဘယ်သူမျှငါ့ကိုကျော်အမှီ ပြု. ဝမ်းမြောက်စေ, မုဆိုးမတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလူဆိတ်ညံရာ, ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အသားတို့၏အပွစျမြားအမြားအပွားများကစွန့်ပစ်ပါ၏, သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားလမျးလှဲသောကြောင့်, မှသည်.
4:17 အကြှနျုပျမူကားအဖြစ်, how am I able to help you?
4:19 Walk on, အမြိုးသားတို့, walk on, for I have been abandoned and I am alone.
4:21 Be ever more peaceful, အမြိုးသားတို့. Cry out to the Lord, and he will rescue you from the hand of the hostile leaders.
4:25 အမြိုးသားတို့, စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လေပြီသောဒေါသအမျက်ကိုသည်းခံ, သင်၏ရန်သူသည်သင်ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုသိရပါတယ်, သင်မူကားလျင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းသည်မိမိမြင်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်သူ၏လည်ပင်းကျော်တက်လိမ့်မည်.
4:26 ငါ၏အနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့ကိုကြမ်းတမ်းသောနညျးလမျးမြားသှားပွီ, သူတို့ရန်သူများကိုသဖြင့်တကွဲတပြားစုကဲ့သို့မှတ်ယူခဲ့ကြသည်များအတွက်.
4:27 စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစဉ်အမြဲပိုပြီးငြိမ်းချမ်းသောဖြစ်, အမြိုးသားတို့, နှင့်သခင်မှထွက်မခေါ်, သင်ပယ်ရှင်းသငျသညျဦးဆောင်ခဲ့သူသူ့ကိုသတိရကြလိမ့်မည်များအတွက်.
4:28 သင်သည်ဘုရားသခင်ထံမှလမ်းလွဲသွားကြဖို့စဉ်းစားသလောက်အဘို့, ဆယ်ကြိမ်လောက်နောက်တဖန်အ converting သည့်အခါသူသည်သင်တို့၏တောင်းမည်.
4:29 သူသည်မကောင်းသောအမှုသို့သင်ဦးဆောင်သူ, သူသညျမိမိကိုတဖန်သင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်အတူထာဝရပျြောရှငျမှုမှသင်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ "
4:30 စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစဉ်အမြဲပိုပြီးငြိမ်းချမ်းသောဖြစ်, ယေရုရှလင်မြို့, for he who has named you, has been affected by you.
4:32 The cities that your sons have served, will be punished, လည်း, she who received your sons.
4:36 Look around, ယေရုရှလင်မြို့, towards the east, and see the happiness that comes to you from God.
4:37 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, your sons approach, whom you sent away scattered. They approach, စုဝေး, from the east all the way to the west, at the word of the Holy One, rejoicing in the honor of God.
5:1 " 'ချွတ်လိုက်, အိုယေရုရှလင်, သင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အအထည်ချုပ်, နှင့်သင်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ထိုနိစ္စထာဝရဘုန်းအသရေ၏ဂုဏ်အသရေပေါ်တွင်တင်, သင်တို့ဘုရားသခင်ထံမှပြီ.
5:2 ဘုရားသခင့တရားမျှတမှုနှစ်ဆအထည်ချုပ်နှင့်တကွသင်ဝန်းရံလိမ့်မည်, သူက, ထာဝရဂုဏ်အသရေသင်တို့၏ခေါင်းပေါ်၌သရဖူတစ်ခုထားမည်.
5:4 သင့်ရဲ့နာမအဘို့ထာဝရဘုရားသခင့အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးတော်မူလတံ့: တရားမျှတမှု၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း၏ဂုဏ်အသရေ.
5:5 ထလော့, အိုယေရုရှလင်, ခြီးမွှောကျ၌ရပ်, အရှေ့ဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှုပတ်ပတ်လည်, နှင့်သင်၏သားတို့ကိုကြည့်ရှု, စုဝေး, ကိုနေမင်းကနေနေရောင်၏ setting ကိုမှ, သန့်ရှင်းသောဘုရား One ၏စကားလုံးအားဖြင့်, ဘုရားသခင်၏အောကျမေ့ဝမျးမွောကျသောစိ.
5:6 သူတို့ခြေသည်ပေါ်တွင်သင်ထံမှထွက် သွား. များအတွက်, ရန်သူများကဦးဆောင်, သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားသည်သင်တို့မှသူတို့ကိုလမ်းပြမည်, နိုင်ငံတော်သို့၏သားများကဲ့သို့ဂုဏ်အသရေအတွက်သယ်ဆောင်ခံရ.
5:7 ဘုရားသခင့မြင့်သောတောင်တပြင်နှင့်ကာလကြာရှည်ကမ်းပါးနှိမ့်ချဖြေရှင်းပြီးပြီ, နှင့်မြေပြင်ညီနိုင်ရန်အတွက်မတ်စောက်သောချိုင့်တက်ဖြည့်ရန်, ဣသရလေသညျဘုရားသခငျ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ကိုစေ့စေ့လမ်းလျှောက်စေခြင်းငှါ.
5:9 ဘုရားသခင်သည်မိမိတန်ခိုးအာနုဘော်၏အလင်းထဲသို့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားဦးဆောင်မည်များအတွက်, သနားခြင်းကရုဏာနှင့်တရားမျှတမှုနှင့်အတူ, အရာသူ့ထံမှဖြစ်ပါသည်။ ''
6:1 This isacopy of the letter that Jeremiah sent to those who would be taken captive into Babylon by the king of Babylon, so as to prophesy to them according to the warning he had received about them from God. “Because of the sins which you have sinned before God, you will be carried away into the captivity of Babylon by Nebuchadnezzar, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်.
6:2 ဆိုတော့, having been taken into Babylon, you will be there many years and foralong time, even to seven generations, yet after this, I will lead you away from there with peace.
6:3 ယခုမူကား, you will see in Babylon gods of gold and of silver, and of stone and of wood, carried upon shoulders, an awful display for the peoples.
6:4 See to it, ထို့နောက်, that you do not in effect become like these strangers and become afraid, so that in awe you would be carried away into their midst.
6:5 ဆိုတော့, seeing the turmoil, behind you and in front of you, as they are worshiping, say in your hearts, ‘You ought to be adored, O Lord.’
6:8 နှင့်, just likeavirgin who loves to decorate herself, so do they take up gold and make designs with it.
6:10 ထို့အပြင်, they even give from it to prostitutes, and use it to adorn kept women, and when they receive it back from the kept women, they use it to adorn their gods.
6:15 ထို့ကြောင့်, သူတို့ကိုမကြောက်ပါဘူး. For just as the vesselaman uses becomes useless when broken, so also are their gods.
6:21 Over their bodies and over their heads fly owls and swallows and birds, နှင့်အလားတူ, even cats.
6:22 From this you should understand that they are not gods. ထို့ကြောင့်, neither should you fear them.
6:23 ထို့အပွငျ, the gold which they have is shiny, but unless someone wipes off the rust, they will not shine. And even when they were molten, they did not feel it.
6:25 Without feet, they are carried upon shoulders, showing their unworthiness to all men. ဆိုတော့, may those who worship them be confounded.
6:26 ဒီအတွက်ကြောင့်, if they fall to the ground, they do not get up by themselves; and if someone sets it upright, they will not stand firm on their own; yet, just like the dead, offerings are placed next to them.
6:27 The priests themselves sell their sacrifices, and they spend it wastefully; နှင့်, ထိုနညျးတူ, their wives take part of it, never sharing anything with the sick or the beggars.
6:28 Fertile and menstruous women contaminate their sacrifices. ဆိုတော့, knowing from this that they are not gods, you should not fear them.
6:34 အလားတူပင်, they can neither give riches, nor avenge evil. If anyone makesavow to them, and does not keep it, they cannot require it.
6:39 In what way, ထို့နောက်, is it to be supposed or said that they are gods?
6:40 For even the Chaldeans themselves do not honor these, အဘယ်သူသည်, when they hear aboutamute, unable to speak, they offer him to Bel, asking from him that he may speak,
6:41 as if these, who are unable to move, would be able to perceive. And even they themselves, when they shall understand this, will abandon them, အဘို့, having come to their senses, they do not consider them to be gods.
6:44 But all things that occur with them are false; in what way, ထို့နောက်, is it to be considered or said that they are gods?
6:46 For the artisans themselves, who make them, do not exist foralong time. သို့ဖြစ်., can these things, which have been made by them, be gods?
6:49 ထို့ကြောင့်, why would they be perceived to be gods, who can neither free themselves from war, nor rescue themselves from evils?
6:50 အကြောင်းမူကား,, in as much as they are only wood, inlaid with gold and silver, so let it be known henceforth, by all nations and kings, that they are false; because it has been revealed that they are not gods, but the work of men’s hands, and there is no work of God in them.
6:51 ဒီအတွက်ကြောင့်, ထို့နောက်, it has been accepted that they are not gods, but are works of the hands of men, and no work of God is in them.
6:54 နှင့်, တကယ်ပါပဲ, when there happens to beafire in the house of these gods of wood, silver, ရွှေနှင့်, the priests will certainly run away and save themselves, but these will truly be burned up like logs in the midst of it.
6:55 Yet they cannot withstandaking and war. In what way, ထို့နောက်, is it to be considered or accepted that they are gods?
6:58 ထို့ကြောင့်, it is better to beaking displaying his power, orauseful vessel inahouse, about which he who owns it will boast, oradoor in the house, which keeps safe what is inside, than to be these gods of falsehood.
6:59 For the sun, နှင့်လ, and the constellations, though they are brilliant and have been sent forth to be useful, are obedient.
6:60 အလားတူပင်, the lightning, when it appears and is evident, နှင့်, ထိုနညျးတူ, the wind blowing in every region,
6:62 ထို့အပွငျ, the fire, having been sent from above so that it may consume mountains and woods, does what it has been instructed to do. Yet these are not similar, neither in splendor, nor in power, to any one of them.
6:63 ဒီကနေ, it should neither be supposed, nor said, that they are gods; since they are neither able to give judgment, nor to accomplish anything for men.
6:64 ဆိုတော့, knowing that they are not gods, ထိုကွောငျ့, have no fear of them.
6:68 ထို့ကြောင့်, in no way is it clear to us that they are gods; ဒီအတွက်ကြောင့်, you should not fear them.
6:69 For just asascarecrow inacucumber field protects nothing, so are their gods of wood, နှင့်ငွေ, and inlaid gold.